Inguqulelo entsha yeProton 4.2-1 ifika kwaye oku kukuphuculwa kwayo | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeProton 4.2-1 ifika kwaye oku kukuphuculwa kwayo
Kungekudala Ivelufa ibhengeze ingxelo entsha yeProton 4.2-1 yeprojekthi, eyakha kwimpumelelo yeprojekthi yeWayini kwaye ijolise ekuqinisekiseni ukumiliselwa kwezicelo zemidlalo yeLinux eyenzelwe iWindows kwaye ifakwe kwikhathalogu yeSteam.
IProton 4.2-1 iphawulwe njengohlobo lokuqala lweprojekthi (iinguqulelo zangaphambili zazinemeko yeenguqulelo ze-beta). Uphuhliso lweprojekthi luhanjiswa phantsi kwelayisensi ye-BSD.
Ngokukhawuleza xa bekulungele Utshintsho oluphuhliswe kwiProton ludlulisela kwiwayini yokuqala kunye neeprojekthi ezinxulumene nayo, ezinje nge-DXVK kunye ne-vkd3d.
Ngubani lowo Awukayazi le projekthi yeProton, ndingakuxelela ngokufutshane ukuba ikuvumela ukuba usebenze usetyenziso lomdlalo olufumaneka kuphela kwiWindows ngokuthe ngqo kumxhasi weSteam Linux.
Iphakheji ibandakanya ukuphunyezwa kwe-DirectX 10/11 (esekwe kwi-DXVK) kunye ne-12 (esekwe kwi-vkd3d), ukusebenza ngoguqulelo lweefowuni ze-DirectX kwiVulkan API, Inikezela ngenkxaso ephuculweyo kubalawuli bemidlalo kunye nokukwazi ukusebenzisa imowudi epheleleyo yesikrini, ngaphandle kwezigqibo zescreen ezixhaswayo kwimidlalo.
Xa kuthelekiswa neprojekthi yewayini yoqobo, ukusebenza kwemidlalo enemisonto emininzi kuye kwanda kakhulu.
1 Yintoni entsha kolu khululo lweProton 4.2-1?
1.1 Utshintsho oluphambili kwiProton 4.2-1
2 Uyenza njani isebenze iProton kwi-Steam?
Yintoni entsha kolu khululo lweProton 4.2-1?
Inguqulelo entsha iyaphawuleka ngokuhlaziya ikhowudi yesiseko sewayini 4.2. Xa kuthelekiswa nesebe langaphambili elisekwe kwiWine 3.16, ubungakanani beeproton ezikhethekileyo zeeproton zehle kakhulu, njengoko Iipatches ezingama-166 zinokudluliselwa kwindawo ephambili yewayini.
Umzekelo, kutshanje, umiliselo olutsha lweXAudio2 API ehanjiswe kwiwayini kuxhomekeke kwiprojekthi ye-FAudio. Umahluko wehlabathi phakathi kwewayini 3.16 kunye newayini 4.2 zibandakanya ngaphezulu kweenguqu ezingama-2,400
Utshintsho oluphambili kwiProton 4.2-1
Ngokukhutshwa kwale nguqulelo intsha yeProton 4.2-1 sinokuqaqambisa ukuba umaleko we-DXVK (DXGI, Direct3D 10 kunye Direct3D 11 ukumiliselwa ngaphezulu kweVulkan API) ihlaziyiwe kwinguqulo 1.0.1.
Ngokubandakanywa kwale nguqulo 1.0.1 Kususwe amaqhaga kunye nokwabiwa kwememori kwiinkqubo ezinee-chips ze-Intel Bay Trail.
Kanye nokuhlengahlengiswa okungagungqiyo kwikhowudi yolawulo lwemibala ye-DXGI kunye nemicimbi esonjululwe eqhuba i-Star Wars Battlefront (2015), Resident Evil 2, Devil May Cry 5, kunye neMidlalo yeHlabathi yeMfazwe.
Ngakolunye uhlangothi, Sinokuqaqambisa ukuba kwiProton 4.2-1 bekukho isimilo esingcono sesikhombisi semouse kwimidlalo, kubandakanya uMhlali oBi 2 kunye noMtyholi Unokukhala 5.
Olunye utshintsho olunokuthi lubonakaliswe kolu khululo lutsha, sifumana oku kulandelayo:
I-FAudio ihlaziyiwe yaya kwi-19.03-13-gd07f69f.
Imicimbi esonjululwe ngokudlala kwenethiwekhi kwi-NBA 2K19 nakwi-NBA 2K18.
Ukulungiswa kwe-bugs ekhokelele ekuphindaphindweni kolawulo lomdlalo kwimidlalo esekwe kwi-SDL2, kubandakanya i-RiME.
Inkxaso eyongeziweyo yenguqulo entsha yeVulkan API 1.1.104 igrafu (yezicelo, ulwazi malunga nenkxaso yeVulkan version 1.1 idluliselwe endaweni ye-1.0).
Imowudi epheleleyo yesikrini ngoku iyafumaneka kwimidlalo esekwe kwi-GDI.
Uphuculo lwenkxaso kwimidlalo esebenzisa IVRInput ukulawula ii-headset zeVR.
Ukuphuculwa kwenkqubo. Yongeze "wenze uncedo" ukuyalela ukwakhiwa kwamaxwebhu.
Uyenza njani isebenze iProton kwi-Steam?
Ukuba unomdla wokuzama iProton, kuya kufuneka ufake ingxelo ye-beta yeSteam Play yeLinux okanye ujoyine i-beta yeLinux evela kumxhasi weSteam.
Kule nto Kuya kufuneka bavule umxhasi weSteam kwaye bacofe uSteam kwikona ephezulu ngasekhohlo emva koko bacwangcise.
Kwicandelo "Akhawunti" uyakufumana ukhetho ukubhalisela uhlobo lwe-beta. Ukwenza oku nokwamkela kuya kuvala umxhasi weSteam kwaye ukhuphele uguqulelo lwe-beta (ufakelo olutsha).
Ekugqibeleni nasemva kokufikelela kwiakhawunti yabo babuyela kwindlela efanayo ukuqinisekisa ukuba sele besebenzisa iProton.
Ngoku ungayifaka imidlalo yakho njengesiqhelo, uya kukhunjuzwa okuphela kwexesha iProton elisetyenziselwa yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Inguqulelo entsha yeProton 4.2-1 ifika kwaye oku kukuphuculwa kwayo
IFirefox 66.0.2 ithathe ixesha elide kunokuba bekulindelwe, kodwa sinenguqulelo ephambili
Ii -apps ezisekwe kwi-Snap ziya kuqala ngokukhawuleza